Power Bank တစ်လုံးဝယ်ရင် ဘာတွေကြည့်သင့်လဲ? - iOS Banker Myanmar
Power Bank တစ်လုံးဝယ်ရင် ဘာတွေကြည့်သင့်လဲ?
03/11/2022 Myat Thura
Power Bank တစ်လုံးမှာ Battery ပမာဏဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာကို mAh နဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ် .. ဒီလိုဖော်ပြထားတဲ့ mAh တွေဟာလည်း အပြည့်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဥပမာ သင့်ဖုန်းက 5,000mAh Battery ပါလို့ 10,000mAh Power Bank ဝယ်ရင် အားအပြည့် ၂ ခါသွင်းလို့ရမယ်လို့မှတ်ယူမိရင်မှားပါတယ် .. Power Bank တွေဟာ ဖော်ပြထားတဲ့ Capacity အတိုင်း ဘယ်တော့မှအပြည့်အဝထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတာတော့ အသေးစိတ်ရှင်းမပြတော့ပါဘူး .. ဒီ Link မှာသွားဖတ်လို့ရပါတယ် – https://blog.banggood.com/the-secret-marketing-trick-behind-powerbank-capacity-29982.html
ဒါကြောင့် ကိုယ်အားသွင်းမယ့် Device တွေရဲ့ Battery Capacity ကိုတွက်ချက်ပြီး အဲ့ထက်ပိုများတဲ့ Capacity ပါဝင်တဲ့ Power Bank ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်
Power Bank တစ်လုံးမှာ အရေးအကြီးဆုံးက Port လို့ပြောလို့ရပါတယ် .. iPhone တွေမှာ Fast Charge ရချင်ရင် Power Delivery (PD) Support လုပ်တဲ့ Power Bank ကိုရွေးချယ်ရပါမယ် .. PD ဟာ Type C နဲ့အလုပ်လုပ်တာကြောင့် Power Bank ရဲ့ Output Port မှာ Type C တစ်ပေါက်အနည်းဆုံးပါရမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ Type C ဟာလည်း 18W အထက်နှုန်းနဲ့အားသွင်းပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် (ပါလာတဲ့ Type C က Input Only ဆိုမရဘူးနော် .. Input Only ဆို Power Bank ကိုအားသွင်းရင်ပဲသုံးလို့ရမယ် .. Power Bank ကနေတခြား Device ကို အားပြန်သွင်းပေးမယ်ဆိုရင်မရတော့ဘူး)
Laptop တွေပါအားသွင်းချင်ရင်တော့ ကိုယ့် Laptop ကဘယ်လောက် W နှုန်းနဲ့အားသွင်းရလဲဆိုတာသိထားရပါမယ် .. 140W နှုန်းနဲ့အားသွင်းရတဲ့ Laptop ကို 22W ပဲထွက်တဲ့ Power Bank နဲ့အားသွင်းရင်းသုံးနေမယ်ဆိုရင် အားကတက်မလာတဲ့အပြင် ကျပါကျနေမှာပါ (ကျတာတော့နှေးမှာပေါ့လေ :3)
တခြား Accessories တွေပါအားသွင်းချင်သေးတယ်ဆိုရင် Port များပြီး၊ Port စုံတဲ့ Power Bank မျိုးရွေးချယ်ဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်
ဒီအချက်ကတော့ သိပ်စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး .. ပိုက်ဆံပေါတဲ့လူတွေအတွက်ပြောပြတာပါ .. ဈေးကြီးတဲ့ Brand တွေဟာ Battery Protection နည်းပညာကောင်းကောင်းသုံးပေးထားတာကြောင့် စိတ်ချရတယ်ပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော် Recommend ပေးချင်တဲ့ Brand တွေကတော့ – Belkin, Morphie, Anker, Native Union, Satechi, Hyper Juice, Xiaomi တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
သင့် iPhone အားသွင်းရင် Battery 80% ကနေ မတက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ဘယ်လို‌ဖြေရှင်းမလဲ ? →
Copyright © 2022 iOS Banker Myanmar. All rights reserved.